एमसीसीमा 'कन्स्पायरेसी थ्योरी' - संसदबाट पास गर्न ओली नै छैनन् तयार ! - Sutra News
काठमाडौँ - केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेट्न माओवादी सम्बद्ध केही सञ्चारमाध्यमका संचालक र केही पुराना पत्रकारहरू पुगे । समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रचण्डले केही ब्रिफिङ गरे । सरकारबाट समर्थन फिर्ता, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धनका विषयहरूमा सामान्य छलफल भयो ।
अनि उठ्यो एमसीसीको प्रश्न । अमेरिकी सहायता परियोजनाअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विगत दुई वर्षदेखि चर्चामा छ । एमसीसी यतिबेला मुख्य राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक हतियार बनेको छ । आफ्नो फाइदाका लागि दलहरू एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बोलिरहेका भेटिन्छन् ।
प्रचण्डलाई भेट्न गएकामध्ये एकजनाले सोधे - 'अध्यक्ष कमरेड, यो एमसीसीका बारेमा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो आधिकारिक धारणा के हो ?'
प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै प्रचण्डले जवाफ दिए - 'हामी एमसीसीका विरुद्धमा छैनौं । तर पक्षमा देखिने स्थिति पनि बनिसकेको छैन ।'
प्रचण्डले थपे, 'सुन्नुस् कमरेडहरू, एमसीसी ल्याउने काम ओलीले गरेका होइनन् । तपाईंहरूलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ को भदौमा सम्झौता भएको विषय हो । त्यतिबेला हामी पनि सत्ता साझेदार थियौं र यसमा हाम्रो सहमति नहुने कुरै छैन । जसरी ओलीले एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने भनेर सबै अपनत्व आफूले लिन खोजेका छन्, यथार्थ त्यो होइन ।'
छलफलमा सहभागी अर्का एकजनाले सोधे, 'यसरी दोहोरो कुरा गर्दा मिडियामा सही म्यासेज गइरहेको छैन । ठ्याक्कै आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर जाँदा के हुन्छ ?'
प्रचण्डले अझ जोड दिएर भने - 'म आफैंले एमसीसीको विरुद्धमा कहीं बोलेको छैन । मेरो कन्सर्न के हो त भन्दा संसदबाट एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडि हामी कुनै पनि सैन्य समूहमा हुँदैनौं है भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरौँ । हामी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पंचशीलका आधारमा अघि बढ्ने तर अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सहयोग पनि लिने स्पष्ट नीतिमा अडिग छौं ।'
प्रचण्डले एमसीसी पास गर्न नदिन ओली नै लागिरहेको आरोप लगाए ।
को सही ? ओली कि प्रचण्ड ?
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले माघ २२ गते नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो । नेपाल बन्दका क्रममा प्रचण्डसमेत सहभागी रहेको एक कार्यक्रममा एमसीसीविरुद्ध नारा लग्यो । प्रचण्डले असहज महसुस गरे ।
प्रचण्डले तत्काल अरू नारा लगाउन आग्रह गरे । तर भीडले मानेन । त्यसपछि प्रचण्ड घडी हेर्दै ढिलो भएको भन्दै त्यहाँबाट निस्के ।
डेढ वर्षअघि कान्तिपुर कन्क्लेवमा बोल्दै प्रचण्डले एमसीसी पास हुने बताएका थिए । राष्ट्रिय हीत र स्वाधीनतालाई ध्यानमा राख्दै एमसीसी पास गर्नुपर्ने प्रचण्डको स्पष्ट लाइन छ ।
प्रचण्डले आफूनिकटस्थलाई बताउने गरेका छन् - 'एमसीसी चुपचाप पास भएको भए भइहाल्थ्यो । यो पास हुन ओलीकै कारण समय लिइरहेको छ । ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न एमसीसीको चर्को पक्षपोषण गरेका छन् ।'
एमसीसीमा प्रधानमन्त्री ओलीको कन्स्पायरेसी थ्योरी किन ?
एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै ओलीले सार्वजनिक वक्तव्य दिन शुरू गरेको धेरै पहिलादेखि हो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा पनि उनले भनेका थिए, 'संसदले एमसीसी पास गरेन, त्यही भएर संसद विघटन गर्नुपरेको हो ।'
यतिबेला कांग्रेस देखिने गरेर एमसीसीको पक्षमा छ । ओली पनि सार्वजनिक भाषणमा एमसीसीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । त्यसो भए एमसीसी अहिले किन राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको छ त ?
ओलीले एमसीसीका पक्षमा बोल्ने गरेको भएता पनि यथार्थ अलि फरक रहेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका एक नेताले सूत्रन्यूजलाई बताए । अहिले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमा रहेका ती नेताले भने, 'एमसीसीका बारेमा २/३ पटक मन्त्रिपरिषदमा पनि कुरा उठेको थियो । ओली आफैंले ठीकै छ, अहिले त्यता नजाऔं, अघि बढाउन आवश्यक भएमा कुरा गरौंला भन्नुभएको छ ।'
२०७६ सालको असोज २५ र २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि पनि एमसीसीका बारेमा नेपालमा बहस भइ नै रहेको थियो । शीको भ्रमण हुनुभन्दा एक महिना पहिला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ओलीसँग एमसीसीका बारेमा सल्लाह गरे ।
ओलीले महरालाई त्यतिबेला भनेका थिए - 'अहिले छोड्नुस । चीनलाई चिढ्याउने कुरा हुन्न । यसलाई उपयुक्त समयमा अघि बढाउला ।' महराले टाउको हल्लाए । यद्यपि महरा आफैं एमसीसीलाई संसदले पास नगरोस् भन्ने भित्री चाहना राख्दथे । चीनसँग नजिक रहेका ठानिने महराले त्यो इच्छा राख्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
एमसीसी पास होला भनेर संसद अधिवेशन अन्त्य ?
आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माओवादी र कांग्रेसको तयारी रहेको विषयलाई कारण देखाएर ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्यका गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । उनले आफूनिकट नेताहरूलाई यही भन्दै आएका छन् ।
संसदको अधिवेशन अन्त्यअघि गत शनिवार ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी संसदमा पेश नगरेको आरोप लगाए । सहभागी कांग्रेस र अन्य दलहरूले एमसीसी पास हुनुपर्ने भन्दै ओलीको भनाइमा सहमति जनाए ।
एमसीसीका बारेमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति जुटिसकेको छ । केही दिनअघि एक व्यापारीको घरमा प्रचण्ड र देउवाको छलफल भएको थियो । देउवाले एमसीसीका बारेमा तपाईंहरूको राय के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको बताए । एमसीसीमा प्रचण्डले समर्थन जनाएपछि देउवा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भएका थिए ।
देउवा र प्रचण्डबीच भएको सहमतिका बारेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी दिइयो । सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र केही दिनमै पास गर्ने जानकारी दिए ।
सभामुख कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सांसदहरूसँग छलफलमा जुट्दै गरेको थाहा पाएका ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।
प्रकाशित :बैशाख ७, २०७८ मंगलवार - २१:४३:१५
कोरोना बोकेर फर्किए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, त्यसैले भएको थिएन उच्चस्तरीय भेट